एसिड पीडित मुस्कानको त्यो हिम्मत! (भिडियो). Break n Links: Media for all - Across the globe
एसिड आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएकी वीरगन्ज बालिका मुस्कान खातुन अब पीडित मात्र नभएर भविष्यमा अन्याय अत्याचार विरुद्ध लड्ने हिम्मतिली भएकी छन्।
आफू जस्ता सयौं मुस्कानको जीवनसँग खेल्ने विरूद्ध लड्ने मनोवल जुटाउँदै उपचारमा जुटेकी उनी आफूलाई एसिड प्रहार गर्नेमाथि मृत्युदण्डको माग गरिरहेकी छन्।
वीरगन्ज छपकैयाकी मुस्कान खातुनमाथि भदौ २० गते बिहान विद्यालय जाने क्रममा दुई युवाको एसिड आक्रमणमा परेर गम्भीर घाइते भएकी छन्।
उनीमाथि एसिड प्रहार गर्ने २ आरोपिलाई जिल्ला अदालत पर्साले बालसुधार गृहमा पठाएको छ।
नारायणी अञ्चल अस्पतालले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएको प्रमाणलाई आधार मानेर आरोपीत द्वयलाई अदालतले बाल सुधारगृह पठाएको हो।
संसाद आलमको उमेर १६ देखि १८ वर्ष र मजीदको १८ देखि २० वर्ष थियो।
तर, मुख्य न्यायाधीश प्रकाश खरेलले सबुत प्रमाणले दोषि भेटिए पनि उमेर एकिन नहुँदा बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार दुवै जनालाई सुधार गृहमा पठाएको बताए।
शुक्रबार कीर्तिपुर हस्पिटल पुग्दा मुस्कानलाई भेट्न कतारबाट कोही पाहुना आउने भन्दै उनका बाबुआमा कुरिरहेका थिए।
मुस्कानलाई भेट्न मानिसहरू आउनेक्रम बाक्लै थियो। ती मानिसहरू उनलाई मनोवल बढाउने भन्दा उनीसँग सेल्फी खिच्ने होडमा देखिन्थे।
कीर्तिपुर अस्पतालको कोठा नं. ५ मा बुबा आमा र केही आफन्त मुस्कानको वरिपरी थिए। मुस्कानको बेड वरिपरी भेट्न आउनेले ल्याईदिएको फूलको गुच्छा र गुडियाहरू थिए।
उनको वेड छेउकै टेबलमा मलालाका जीवनी समेटिएको पुस्तकहरू थिए। पुस्तकको आवरणमा रहेको मलालाको तस्बिरमा देखिएको चमक अनि मुस्कानको आँखामा झल्किएको आत्मविश्वास कही कतै कमी देखिदैनथ्यो। मात्र फरक यति थियो अहिले मुस्कानको शरीरमा एसिडले पारेको असरको दागहरु छन्।
उनको घाँटी, हात तथा कानमा एसिडले पारेको असरका कारण उनी शारीरिक रुपमा कमजोर छिन्। तर, यति हुँदाहुँदै पनि मुस्कानको अनुहारमा देखिएको चमकले उनमा बढेको आत्मविश्वास छर्लङ्ग देख्न सकिन्थ्यो।
आमा बुबाको आडमा बसेकी उनको अनुहार कत्ति निराश थिएन बरू उनको आँखामा एउटा छुट्टै चमक देखिन्थ्यो।
एसिडको केही थोपा आँखा र कानमासमेत परेकोले उनको एउटा कानको जालीमा प्वाल परेकोले त्यसको अपरेशन गरिएको छ। जसले गर्दा उनलाई डाक्टरले कम बोल्नु भनेको छ।
आमा बुबाको छेउमा बसेर उनी सबैको कुरा सुन्छिन् र आँखाको ईशाराले प्रतिक्रिया दिन्छिन्। आफूमाथि एसिड प्रहार गर्नेलाई सरकारले कारबाहीको सट्टा सुधारगृहमा पठाएको समाचार सुनेदेखि मुस्कानलाई सरकारसँग रिस उठेको छ। 'म माथि एसिड प्रहार गर्नेलाई सरकारले कडा कारवाही गर्नैपर्छ', मुस्कानले विस्तारै बोलिन्।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत मुस्कान पढाईमा निकै अब्बल थिईन्। वीरगन्जकै स्थानीय त्रिभुवन हर्मोन विद्यालयमा पढ्दै गरेकी उनी सरकारी विद्यालय भए पनि बिहानि सिफ्टमा अंग्रेजी माध्यममा पढ्थिन्।
एक दिदी, दुई भाइ र एक बहिनी भएकी मुस्कान अरू छोराछोरी भन्दा निकै फरक स्वभावकी भएको उनका बुबाले बताए।
मुस्कान सानैदेखि अरू भन्दा अलि फरक कुरा गर्थिन्। ठूलो भएर सामाजिक सेवामा लाग्ने उनको विचार रहेको बुबाले बताए।
१८ वर्षको उमेरमै विहे गरेका मुस्कानको बुबाले ३६ वर्षको उमेर भित्रै पाँच सन्तानका अभिभावक भइसकेका छन्।
'छोरीलाई देश विदेशबाट सबै जनाले हौसला दिएपछि उनको आत्मविश्वास निकै बलियो भएको छ', मुस्कानकी आमा सहनाजले बिएलसँग भनिन्।
हिजोको दिनमा मुस्कानको कमजोर शारीरिक मानसिक अवस्था देख्दा हामी पनि निकै आत्तिएका थियौं। तर, अहिले छोरीको मनोवल बढेको देख्दा खुसी भएका छौं', मुस्कानका वुवाले भने।
मुस्कानलाई विभिन्न भारतीय कलाकारले लाईभ भिडियो कलमार्फत सान्तवनासमेत दिएका थिए।
भारतीय कलाकारले मुस्कानलाई सान्तवना दिए लगत्तै उनलाई नेपाली कलाकार पनि भेट्न जाने क्रम बढेको छ।
मुस्कानका आमा वुवा भन्छन्, 'भेट्न आउने मान्छेको भीड त बढ्दो छ, तर उनको उपचारको लागि चाहिने सहयोग पर्याप्त छैन।'
मुस्कानको उपचारको लागि ५० देखि ६० लाख लाग्ने भनिए पनि हालसम्म बढीमा ५ लाखसम्म मात्र संकलन भएको उनका बुबाले दुखेसो गरे।
'डाक्टरले उनको पहिलो चरणको उपचार पछि कानको उपचारको लागि चाईना वा सिंगापुर लैजानुपर्छ भनेका छन्। तर उनको उपचार गर्न पैसा कसरी जुटाउने त्यहि चिन्तामा छौं', मुस्कानका बाबु रसुलले भने, 'संसारभरबाट छोरीको मनोवल बढाउने काम त भयो। तर, उनको उपचारको लागि आर्थिक रुपमा सहयोग भएन भने भोलिका दिनमा आफू जस्तै हिंसापिडितको लागि डटेर लड्ने छोरीको सपना अधुरो हुन्छ।'
अमेरिकामा फेरि अर्को मास सुटिङ : ४ मारिए, ६ घाइते